Umeerin - kulleejooyinka hore ee Colorado
CEC waxay ardayda u fidisaa umeerin bilaash ah! Macallimiinteena ayaa ka go'an inay ka caawiyaan ardayda inay gaaraan guul tacliimeed. Waxaan leenahay balamaha shaqsi ahaan iyo khadka tooska ahba. Macallimiinteennu waxay bixiyaan kaalmo shaqsiyeed xagga xisaabta, Ingiriisiga / qorista, bayoolajiga, kiimikada, Faransiiska, Isbaanishka, iyo inbadan.
CEC Fort Collins HS waxay siisaa umeerin shaqsi ah Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 7:50 waxayna ku egtahay 3:45. Sanad dugsiyeedka 2021-2022, waxaan sidoo kale bixin doonnaa tiro aad u kooban oo ah saacadaha internetka iyo fiidkii.
21-22 Kalandarka Waxbarashada
Fadlan isticmaal nidaamka Boos celinta si aad jadwal ugu sameysato meel fog ama shakhsi ahaan umeerin! Umeerin shaqsiyeed waxay ku taalaa Xarunta Ardayda Tacliinta ee qolka 218.
Waxaan haynaa saacado soo-gal ah oo la heli karo iyo sidoo kale waqtiyada loo qorsheeyay.
Umeerin waa gebi ahaanba bilaash!
Fadlan isticmaal nidaamka Boos celinta si aad jadwal ugu samaysato meel fog ama shakhsi ahaan umeerin! Umeerin shaqsiyeed waxay ku taalaa Xarunta Guusha Ardayda qolka 220.
CEC Parker wuxuu bixiyaa ballamaha umeerinta xisaabta maalintii oo dhan iyadoo la socota Dr. Jennifer Laske iyo Marwo Sheri Graf, iyo sidoo kale Waxbaridda Peer ee maaddooyinka kale. Waxa kale oo aan haynaa Dr. Kelsey Minnick oo diyaar u ah ka-soo-galitaannada galabnimada Talaadada iyo Khamiista si uu kaaga caawiyo qorista iyo isgaarsiinta. Wax-u-dhigidda qof ahaaneed waxay ku taallaa Xarunta Guusha Waxbarashada ee dabaqa sare.
RFP ee CEC Fort Collins & Barnaamijka khadka tooska ah
RFP CEC Fort Collins
Barnaamijka khadka tooska ah ee RFP CEC